CNC Olukhulu Service - Anebon Metal Products Co., Ltd.
CNC Machining Izikhungo
CNC Milling Izikhungo
CNC Olukhulu Izikhungo
Die Ukulingisa Izikhungo
CNC Machining Izingxenye
CNC Milling Izingxenye
CNC Ukuvula Izingxenye
Die Ukulingisa Izingxenye
Kuyini CNC kokuphenduka?
CNC lathe kuyinto ephezulu ukucacisa, high-ukusebenza kahle okuzenzakalelayo komshini ithuluzi. Ziphethe multi-esiteshini turret noma amandla turret, ithuluzi umshini has a ezahlukene processing ubuchwepheshe, kungaba ukucubungula amasilinda yomugqa, amasilinda idayagonali, lwesikhathi futhi workpieces ahlukahlukene eziyinkimbinkimbi ezifana izindikimba kanye anemifantu, nge yengetiwe komugqa futhi yengetiwe isiyingi.
Ngo CNC kokuphenduka, amabha impahla ebanjwa chuck futhi ezijikisiwe, futhi ithuluzi sidla at engele ahlukahlukene, futhi abaningi ithuluzi Umumo ingasetshenziswa ukwakha ukuma oyifunayo. Lapho isikhungo has turning futhi Milling imisebenzi, ungayeka ukujikeleza ukuvumela Milling nezinye bobunjwa. Lokhu ubuchwepheshe ivumela ezihlukahlukene, ezinobukhulu nezinhlobo impahla.
Amathuluzi we CNC lathe futhi siphenduka emanzini sikhungo ogibele turret. Sisebenzisa isilawuli CNC nge "real-time" ithuluzi (isib Senkonzo Samaphayona), okuyinto futhi eyeka ukujikeleza futhi unezela neminye imisebenzi efana imishini, anemifantu futhi Milling evele.
Uma udinga CNC kokuphenduka, singamalungu omunye abakhiqizi onekhono kakhulu futhi ngempumelelo ontengo yakhe yayinqunyiwe. Nge 14 amasethi lathes eziphambili othomathikhi, ithimba lethu angakhiqiza izimpahla ngokunembile futhi ngesikhathi. I ezahlukene amakhono okukhiqiza ivumela Anebon ukunikela esiyingqayizivele isampula izingxenye. Izinto esasinazo ekukhiqizweni kuqinisekisa Ukuzivumelanisa nezimo zethu kanye nokuzethemba. Futhi sizobe ukuhlangabezana nezidingo wonke umkhakha sikhonza namazinga ngokwanele elawula. Sigxila izinga kanye kwamakhasimende.
CNC turning izingxenye thina akhiqize
Siye kukhiqizwa anhlobonhlobo CNC izingxenye turning eminyakeni 10 futhi ithimba lethu lonjiniyela uye walungiselela amakhasimende ethu njalo izixazululo ewusizo ukuze baxazulule izinkinga zabo ekukhiqizeni CNC izingxenye turning. Siqinisekisa njalo eliphezulu machining, ngisho esimweni izingxenye eziyinkimbinkimbi, usebenzisa eziyinkimbinkimbi umshini amamojuli futhi usebenzisa onekhono CNC lathe isebenze umshini. Ngenxa Anebon njalo ozungezayo ngokunemba high!
Machining IZINKETHO IN CNC Ukuvula
Nge zakamuva futhi ukusebenza high imishini yethu ehlanganisa CNC kokuphenduka izikhungo kanye 4-eksisi ukuvula imishini . Thina inikeza ezihlukahlukene ongakhetha yokukhiqiza. Kungakhathaliseki elula noma eziyinkimbinkimbi waphenduka izingxenye, eside noma esifushane waphenduka ukucacisa izingxenye, siyihlomele kahle wonke amazinga ayinkimbinkimbi.
/ Ukukhiqizwa uchungechunge Prototype machining zero
Ukukhiqizwa medium batch osayizi
Izinto ezilandelayo eqinile nakho ngeke kusize ezisetshenziswa: aluminium, insimbi engagqwali, ithusi, inayiloni, steel, acetal, polycarbonate, acrylic, nethusi, PTFE, titanium, ABS, PVC, ithusi njll
yethu nendawo yamathe onyawo, leaderships, innoation, imikhiqizo
Vakashela kwamakhasimende ethu eJalimane
Amakhasimende baseYurophu wavakashela Anebon
Ikhasimende eJalimane Vakashela The Inkampani F ...
Anebon Hardware Co., Ltd. etholwe ISO900 ...
Precision Futhi Inamandla CNC Machine
Factory Imvelo e Anebon
Ifoni: + 86-13509836707
Ikheli: Rongtong Industrial Park,
aluminium die thusi izingxenye , aluminium thusi , aluminium die yabalingisi , ekubunjweni izingxenye , zinc asakazwe die izingxenye, die thusi izingxenye ,